Afọ iri nke Xbox 10 | Akụkọ akụrụngwa
Afọ iri nke Xbox 10
Ka ọnwa nke iri na abụọ dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na abụọ n’afọ 22, ọ siri n’ụgbọ ahụ pụta Xbox 360 na United States, nke ugboro abụọ nke Microsoft n'ahịa egwuregwu vidiyo dị ka onye na-emepụta ihe njikwa, na-eme otu ụbọchị ole na ole ka e mesịrị na mpaghara Europe na Japan. Xbox 360 biara tinyere otutu aha ya na igba egbe ya, n’ime nke anyị nwere ike ịkọwapụta Oku nke Ọrụ 2, Ikpe ikpe: Original Criminal, Kameo: Elements of Power, Zero Perfect Dark y Ihe oru ngo Gotham Racing 3.
Mwepụta nke ihe njikwa ahụ dị ntakịrị ma megide elekere: Microsoft malitere imeputa igwe mmadu Xbox 360 naanị 69 ụbọchị tupu ịbata na ụlọ ahịa. Maka nke a, enweghị ngalaba zuru oke iji gboo mkpa maka igwe desktọọpụ ọhụụ, ọkachasị na United States na Europe, ebe Japan, site na mbido, guzogidere nnweta nke Microsoft ma chere mmegharị nke Sony ya PlayStation 3.
Xbox 360 nwere nnukwu ngwaike nke ndị mmepe ngwa ngwa mara: o nwere Xenon CPU de IBM na a ATI Xenos GPU, nke na-anọchite anya mmụba dị ịrịba ama karịa ọkwa anyị hụrụ n'ọgbọ egwuregwu ndị gara aga. Ọ bụ ezie na ọtụtụ egwuregwu mmalite bịara Xbox 360 enwere ike iwere ha dị ka agbụrụ ma wepụta oge iji gosipụta mmemme gosipụtara n'ezie ihe igwe ahụ nwere ike.
Mgbe njikwa ahụ enweela ezigbo njirimara ọrụ, ndị izizi malitere ịpụta nsogbu ngwaike. Na mbu, enwere okwu banyere ikpe dịpụrụ adịpụ, mana ngwa ngwa ihe ọjọọ nke oku ahụ gbasara okirikiri ọnwụ y Microsoft o nwere bọmbụ n’aka ya nke nwere ike ịgbawa ma bibie ụdị a Xbox. Nye ndị nke Redmond, nyere ohere maka ihe ahụ merenụ, ha enweghị ihe ọzọ ha ga-eme ma ọ bụrụ na ha nyekwuo afọ nke ikike na njikwa ahụ, ngosipụta nke na-efu karịa ijeri dollar. N'oge ahụ, ụfọdụ akwụkwọ gosipụtara na nsogbu nke acha uhie uhie bụ n'ihi atụmatụ ngwaike na-adịghị mma dị ka Microsoft ọ kwụsịrị njikwa njikwa kwesịrị ekwesị iji nwee ike ịbịa n'oge maka mkpọsa Krismas 2005. N'ikpeazụ, ọtụtụ nyochagharị nke njikwa ahụ mere, yana mgbanwe na ngwaike, ikike diski ike na ịmecha mma, iji nye ndị ahịa ihe usoro a pụrụ ịdabere na ya.
Maka ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu, otu n'ime ihe ịga nke ọma kasịnụ nke njikwa bụ obodo e kere gburugburu Xbox Live, gaminggba chaa chaa n'ịntanetị nke Microsoft, nke kewapụrụ n'etiti ndị na-akwụ ụgwọ ọrụ, ndị a na-akpọ goldna silver. N'agbanyeghị na ịjụ Sony na ọgbọ ahụ na-akwụ ụgwọ maka igwu egwu n'ịntanetị, emesia, dịka anyị hụworo na PlayStation 4, dabara na ugwo nlereanya na ya akpan akpan usoro PlayStation Plus, nke mgbakwunye na, Microsoft, ga-eburu n'uche ụfọdụ ihe ndị dị mkpa, dị ka ịnyefe egwuregwu iji kwụọ ndị ahịa ụgwọ.
Ọzọ nke ike nke Xbox 360 na ọtụtụ ga-ekwu ga-abụ nke ha Iwu nchịkwa. Ọ bụ ihe ergonomic na ala mgbanwe nke njikwa S site na mbu Xbox, na bọtịnụ kesara nke ọma, ihe na-akpali akpali, bọtịnụ nduzi na akara ikuku. Agbanyeghị, isi mmalite adịghị ike nke njikwa izizi bụ obere isi ike na - enweghị isi, mana dịka njikwa, njikwa nke Xbox 360 e doro ya ugboro ole na ole. Iwu a na-ewu ewu nke iwu ahụ bụ nke mere na amalitere ya PC, na nnukwu ndakọrịta na nkwado sitere na ndị mmepe jiri mmemme ha maka ikpo okwu a.
Ihe ọzọ dị mkpa nke ngwaike na ndụ nke Xbox 360 bụ iwebata Kinect. Na nkwupụta mbụ nke akụkụ, a gwara anyị banyere ya dị ka mgbanwe na ụwa nke egwuregwu vidio, n'ihi ikike nke imikpu nke a na-ahụtụbeghị mbụ - cheta Milo? O doro anya na ọ bụghị - ohere enweghi ngwụcha. N'ikpeazụ, ifufe buuru okwu ndị ahụ, aha maka Kinect ọ na-ebelata ka usoro egwuregwu dị larịị na gadget mechara na-ekpokọta uzuzu n'akụkụ ụfọdụ nke ụlọ ndị ọrụ. N'ikpeazụ, e nwere nwughari iji weghachite teknụzụ a na ndị ahịa ya Xbox One, ma azịza ya adịghị mma, na Microsoft malitere jiri nwayọ na-akuku Kinect.
Ọ bụrụ na anyị ga-ekwu maka sọftụwia na - ekewaghị ekewa, naanị aha maka maka Xbox 360 Edebere ha n'akụkụ abụọ: naanị na consoles oengụkọta iche. Ha nyere ọtụtụ ihe ha ga-ekwu maka ha Mass Mmetụta o BioShock mgbe a tọhapụrụ ha na nyiwe ndị ọzọ, ma ọ bụ nkatọ PC nsụgharị de Alan Wake, Gears nke Agha o Ablegba akwụkwọ III. Ma ilekwasị anya na ahụmahụ ndị nwere ike inye anyị naanị Xbox 360, anyị kwesịrị igosipụta mmemme dị ka Halo 3, Halo Reach, Halo 4, Ace Combat 6, Blue Dragon, Crackdown, Nwụrụ Anwụ, dị iche iche Forza Motorsport, mbụ trilogy nke Gears of War, Alan Wake, Kameo, Odyssey furu efu o Ihe oru ngo Gotham Racing 4.
N'ime ọtụtụ katalọgụ nke njikwa ahụ, egwuregwu ndị rere ihe karịrị nde isii bụ ndị a:
Kinect Adventures - 21.63 nde
Tanya Nchekwa onwe V - 15.60 nde
Oku nke Ọrụ: Agha nke Oge a 3 - nde 14.59
Kpọọ Ọrụ: Black Ops - 14.41 nde
Kpọọ Ọrụ: Black Ops II - 13.49 nde
Oku nke Ọrụ: Agha nke Oge a 2 - nde 13.44
Minecraft - nde 13
Halo 3 - 12.06 nde
Halo 4 - 9.41 nde
Kwadobe nke Agha 2 - 6.74 nde
Xbox 360 nwere ike iguzo PlayStation 3 ekele nke oke obi ike na mpako nke Sony. Pricegwọ nke njikwa Microsoft wee bụrụ na ọ ga - adịrị ndị na - azụ ahịa mfe inweta - cheta nke ahụ PS3 wụbata n'ime 600 euro ọbụnadị gụnyere egwuregwu-, ndị mmemme ji usoro ihe owuwu na-enweghị mgbagwoju anya dịka Cell na n'oge mmalite ya, anyị hụrụ nnukwu ndepụta nke egwuregwu. Otú ọ dị, njedebe ikpeazụ nke ndụ njikwa bụ ihe a na-enyo enyo, ya na oke ụkọ mmiri mmiri nke okpukpu atọ-A nanị aha na Microsoft gbadoro anya na ịgbasa Xbox Live na na-abanye Kinect na foneelu. N'agbanyeghị ihe niile, n'agbanyeghịkwa ụzọ ọ laghachiri Sony, Xbox 360 jisiri ike ruo ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na-enweghị onye ọ bụla chere na ọ laghachi na Nọvemba 2005, ọkachasị mgbe ọgbọ abụọ ahụ gachara akara PlayStation.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Afọ iri nke Xbox 10
Ihe ndezi ederede ntanetị kacha mma n'ịntanetị
Oge asaa echefughi echefu n’ime ime ụlọ ịwụ egwuregwu vidio